Baaq CODSI AH ee kusocda Xildhibaanada labada Gole ee Federaalka Soomaaliyeed:-(Akhriso) – Hareerley News
Waxaan Xildhibaanada labada Gole ka codsanayaa in aay ka horyimaadaan DHULBADEEDKA SOOMAALIYEED oo lagu soo koobayo 12nm.
Waa ayaan darro in la heli waayo 20 Xildhibaan oo MOOSHIN KA GEEYA DHULBADEEDKA SOOMAALIYEED oo lagu soo koobayo 12nm ayadoo la TIRTIRAYO LAW 37.
Anigoo QAXOOTI ku ah dal shisheeye ayaa waxaan difaacay LAW 37, waxaana hilfaha u qaada MASHRUUC aay wadday Boqortooyada NORWEY in aay cabbir cusub u sameeyaan DHULBADEEDKA SOOMAALIYEED ayadoo la iska indhatirayo LAW 37. Mashruucaas waa hakaday, laakiin jid kale ayaa hadda lasoo maray.
(Markii irridka laga xiray, bey darriishadda kasoo galeen).
Tirtiridda Law 37 waa qorshe gurracan oo muddo dheer laga soo shaqeynayay.
YAAN LA ISKA AAMUSNAAN ILLA LAGA GAARAYO (18 December 2017) oo ah maalinta maxkamadda dib loo furayo.
Maantay Xildhibaanada labada Gole waa awoodaan in aay inoo badbaadiyaan LAW 37.
Cid ka hor imaan karta GOAANKOODA ma jiro.
W/Q – Bashir Mahamud home Facebook
U fiirso waxaa gabi ahaanba joogsaday howlgaladii Shabaab lagula dagaalamaayey. Caksigeeda Shabaab ayaa weerar ah , waxaa gabi ahaanba amni xumo u xirmay wadada MUqdishio iyo Balcad iyo tan Jowhar iyo Balcadba. waxaa shabaab dhowr jeer Qabsadeen iskoodna ugu baxayeen Degmada Balcad oo muhim u ah amniga caasimada iyo isku xirka Gobolada Hirshabeele. waxaa la […]
(Daawo):-Gacal iyo Falanqeynta Qowleysatadii ka degey Kismaayo Ee Jabiyey Sharciga Wadanka. Halkaan hoose ka Daawo
C/C shakuur Warsame Oo Shaleyto wasaxaafadeed ku qabtey Xarunta Xisbigiisa Wadajir ayaa ka dhawaajiyey hadalo badan Oo maskaxda daalinaaya hadaladaas Oo C/C shakuur ku sheegey in dowlada iyo Al shabaab isku dhex milmeen taasi waa mid mida kale Cabdirixmaan ka dhawaajiyey ayaa ah in Al shabaabku Cashuuro ka gurtaan Ganacsatada Somaaliyeed ee Alaabaada kala soodega […]